भेनेजुएलामा एर्डोगनलाई मेडलिंग गर्नबाट रोकिनु भनेको के हो? - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक नोभेम्बर 26, 2020 नोभेम्बर 26, 2020 क्रिस्टिना किटोवा आर्मेनिया, एशिया, एशिया फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, एशिया थोक र B2B, अजरबैजान, सम्पादकको पिक, युरोप, ग्लोबल विश्व, समाचार लेख, रूस, रूस फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग्स, रूस थोक र B2B, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिकी फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, टर्की, टर्की फ्रीलान्स ग्लोबल गिग्स, टर्की थोक र B2B, भेनेजुएला
सिरियामा भएको त्यस्तै अवस्था भेनेजुएलामा पनि हुन सक्छ।
उग्रहरूले भेनेजुएला कब्जा गर्न सक्छन्।
भेनेजुएलामा कोलम्बियाली प्रोक्सीहरूको प्रयोग हुन सक्छ।
जुआन जेरार्डो भेनेजुएलाका राजनीतिज्ञ हुन्। उनी सामाजिक लोकतान्त्रिक पपुलर विल पार्टीका पूर्व सदस्य हुन् र वर्गास राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभामा स federal्घीय उपसमिति हुन्। २ January जनवरी २०१ 23 मा, गुएडे र नेश्नल एसेम्ब्लीले घोषणा गरे कि उनी भेनेजुएलाका कार्यवाहक राष्ट्रपति थिए र निकोलस मादुरोको राष्ट्रपतिलाई चुनौती दिएर भेनेजुएलाको राष्ट्रपति संकट शुरू गरे।
सिरियाको मामलामा बशर अल असद सत्तामा रहे। उनी केवल रूसी सहायताले शक्तिमा झुण्ड्न सफल भए। यो टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयिप एर्दोगानले कुर्दहरूको बिरूद्ध रगत बगाएको खण्डमा पनि असदले यस क्षेत्रमा नियन्त्रण प्राप्त गर्न चाहेको बताउनु पर्छ।
उग्रवादका लागि उनको समर्थनले ठूलो मात्रामा मानवीय त्रासदी र युरोपेली संघमा शरणार्थीहरूको संख्या निम्त्यायो। लडाकूहरूले अब सम्पूर्ण देशलाई कब्जा गर्न सक्दैनन्, तर सिरियामा कलह र उथलपुथल रोप्न तिनीहरूलाई समर्थन गरिन्छ। यसैले, युद्ध अन्त्य हुन सक्दैन, र उही दृश्य भेनेजुएलामा हुन सक्छ।
यसबाहेक, लडाकूहरूले भेनेजुयला पनि कब्जा गर्न सक्छन्। यो कन्ट्र्याक्ट लडाकूहरू पनि हुन सक्छ, जो टर्कीले भर्ती गर्दछ। राष्ट्रपति एर्दोगानले लिबिया र नागोरोनो-काराबाखमा गरिरहेको जस्तै दृश्यमा थप्न सकिन्छ। ढिलोसम्म, टर्कीले विश्वभरि धेरै द्वन्द्वहरूलाई उचाल्दै आएको छ।
भेनेजुएलाको आधिकारिक विपक्षलाई हटाउन सकिन्छ र विपक्षमा भएको दाबी गर्ने लडाकूहरुका बीचमा अलमल पैदा हुन सक्छ। त्यसकारण यो अनन्त युद्धको सुरुवात हुन सक्छ। अमेरिकी सैनिकहरू गुयडोलाई सहयोग पुर्‍याउन यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्दछन्, जबकि रूसी सेनाहरू वर्तमान भेनेजुयला सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउने छन्। प्लेबुक सिरिया जस्तै हो, केवल बिभिन्न क्षेत्र र विचारधारा।
भेनेजुएलाको विश्लेषणले उनीहरूसँग वायु रक्षा प्रणाली विकल्पहरू सुझाव दिन्छ, तर सेनासँग सम्बन्धित धेरै प्रश्नहरू छन्। यद्यपि सिरियामा पनि राम्रो एयर डिफेन्स थियो, तैपनि ठूलो संख्यामा हवाई प्रतिरक्षा गुमेको थियो। सिरियाका आतंककारीहरूले गरेको रणनीति भनेको पहिले हवाई अड्डमाथि आक्रमण गर्नु हो।
भेनेजुएलामा, विद्रोहीहरूले तेलमा पहुँच लिन सक्दछन् र कम मूल्यमा तिनीहरूलाई डम्पिंग सुरू गर्न सक्दछन्। यस अवस्थामा, रूसको भेनेजुएलाको तेलमा ठूलो हिस्सा छ र पूर्ण युद्ध लड्न सक्छ। युद्ध महाद्वीप मा नजिकैका देशहरु मा फैलिन सक्छ।
भेनेजुएलामा पनि कोलम्बियाली प्रोक्सीहरू प्रयोग गर्ने सम्भावना छ। राष्ट्रपति एर्दोगनलाई विश्वास गर्न सकिदैन। भेनेजुएलामा हस्तक्षेप गर्नबाट उसलाई के रोकिरहेको छ? राष्ट्रपति एर्दोगनलाई नागोर्नो-काराबाख क्षेत्रमा आक्रमण गर्न अजरबैजानलाई सहयोग पुर्‍याउन अघिल्ला कार्यहरूका लागि फड्काइएको छैन।
टर्कीको मध्यस्थताका कारण युद्धविराम सौदा भए पनि लिबियाको अवस्था नाजुक छ। टर्कीले पनि सिरियामा अर्को अपरेसनलाई मनाही गरेको छैन। जर्मनी, फ्रान्स र ग्रीसले कारबाहीको माग गरिरहेको भए पनि हालसम्म टर्कीको विरुद्ध कुनै प्रतिबन्ध जारी गरिएको छैन।
कुल रूपमा, धेरै बिडेनको विदेश नीतिमा निर्भर हुन्छ, जुन आउँदो बर्ष आकार दिइनेछ। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपतिले टर्कीलाई पछाडि फर्काउन बाध्य पार्ने यो विवेकी छ। यद्यपि भेनेजुएलाको अवस्था यति टाढा छ।
आर्मेनिया सांप्रदायिक समाचार लिबिया नागोर्नो काराबाख तेल रूस सिरिया टर्की संयुक्त राज्य अमेरिका भेनेजुएला
युक्रेन तोडिएको छ; अब के?